Thailand dị ịtụnanya na -emeghe ndị ọbịa si mba 45 a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Thailand dị ịtụnanya na -emeghe ndị ọbịa si mba 45 a
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ elu Thailand
Thailand nwere ike na-amụmụ ọnụ ọchị ọzọ ka ọnwa Nọvemba 1 gachara, mgbe gọọmentị Thai ga-emezigharị ya n'ókè wee nabata ndị ọbịa si mba 45 nwere aka mepere emepe na ịmụmụ ọnụ ọchị Thai.
Ahịa Njem Ụwa dị njikere imeghe ọnụ ụzọ ya na Nọvemba 1, otú ahụ ka Alaeze Thailand dịkwa.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya na Gọvanọ nke njem nlegharị anya ga-aga ahịa njem njem ụwa na London.
Emebelarị ọgbakọ ndị nta akụkọ maka Mọnde na WTN ịkpọsa mba 46 na ndepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ ka ha nwee ọmarịcha ezumike ọzọ na ala eze.
Prime Minista Prayut Chan-o-cha nke Thailand ga-emeghe obodo ahụ nye ndị ọbịa sitere na mba 46 kama naanị mba 10 Covid-19 nwere obere ihe ize ndụ ekwuputara na mbụ, malite na Nov 1.
Agbanyeghị na ekwuputaghị ọkwa gọọmentị mba ofesi nke Thailand bipụtara ndepụta mba ekwe ka iziga ụmụ amaala Thailand.
Gaa na Thailand ọzọ site na obodo na ókèala ndị a:
Dov Kalmann, onye nnọchi anya ndị njem nlegharị anya na Thailand na-anabata ozi a. Ọ gwara ya eTurboNews mgbe ndị America gasịrị, Israel na-ezigara ọtụtụ ndị ọbịa na mpaghara mepere emepe maka njem nlegharị anya na Thailand. Nke a bụ nnukwu ozi!